नारी हस्ताक्षर – Non Resident Nepali Association KSA
Articles & Literatures written by Naaris (Ladies)
अब पनि द्वन्द प्रतिद्वन्द र परनिर्भरता कायम राखिरहने हो भने भावि सन्ततिले सराप्ने छन् । सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन । त्यसैले आ आफ्नो ठाउँबाट सबै उठ्नु जरुरी छ ।
२ वर्षमा मात्रै ८२ जना महिला खाडी मुलुकहरूबाट गर्भवती बनेर फिरेका छन् भने अरू २ दर्जनले साथमा बच्चा लिएर विदेशबाट नेपाल फर्केकाछन् ।
‘प्रेम, विवाह, यौन र सम्बन्धविच्छेद’ हरेकको स्वतन्त्रता पनि हो । यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नुहुँदैन ।
राजदूत पौडेलका बुझाइमा कुवेत आएर पीडित, शोषित हुने श्रमिकहरू सबैजसो नेपालीकै कारण पीडित भएका छन् ।
अनुराधालाई गजलमा शुभकामना- सुमित्रा पौडेल
छैन अझै हाम्रो देशमा ति नारीको अस्तित्व क्यै
लाखौ नारी अघि बढ्ने प्रेरणा ल्यायौ एउटा !
कहिलेसम्म यही कहालीलाग्दो नियतिको सिकार भइरहने हाम्रा चेलीबेटीहरू ?
वैदेशिक रोजगारी : नोट कति, चोट कति ?
उनीहरुको इच्छा अनुसारको खाना बनाएर खुवाइसकेपछि शरिर पनि सुम्पिनु पर्ने बाध्यता उनले भोग्नु पर्‍यो ।
नेपालका नेताहरूले उठाएका साम्यवाद, पुँजीवाद, मधेसवाद वा क्षेत्रवादलगायतका प्रायः सबै एजेन्डा अहिलेको सन्दर्भमा महत्त्वहीन छन् ।
सपना प्रधान मल्ल ले बनानमा १५ नेपाली महिलाद्वारा आत्महत्या’ सम्बन्धी समाचारले निकै संवेदनशील र गम्भीर बनाएको छ । बारम्बार खाडी क्षेत्रमा महिलाहरूले आत्महत्या गरेको समाचारहरू हामी पढिरहेका छौं । महिलालाई खाडी क्षेत्रमा घरेलु काममा नपठाउने सरकारी नीति हुँदाहुँदै पनि कसरी पुगिरहेका छन्, उनीहरू त्यहाँ ? किन आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् ? यस्ता घटनापछि राज्यको …
कति पढ्ने आत्महत्याको समाचार ? Read More »
डा. अरुणा उप्रेती प्रिय बहिनीहरू तिमीहरूमध्ये जसले यो पत्र पढ्छौ, कतिपय सायद अंग्रेजी स्कुलमा पढिरहेका होऔला, कतिपय सहरका सरकारी स्कुलमा र कतिपय गाउँघरका स्कुलहरूमा वा ११-१२ कक्षामा पढिरहेका होऔला । कति बहिनीहरूले चाहिँ ८-९ कक्षा पढेर छोडेको होला । कतिपय कामको बोझले वा आमाबुबाले अब पढ्न पुग्यो भनेर स्कुल छोडाइदिएको होला । कतिपय किशोरीहरूचाहिँ स्कुलमा …
किशोरीहरुलाई पत्र Read More »
सपना भनेको के हो त ?
अर्कोको सेवागरी कमाएको धनले,
परिवार र सन्तानलाई खुशीराखी
झुपडी सम्झिएर, भुसुक्क निदाउछन्
सपना यही हो कि त ?
धेरैका लागि वैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्प भएको छ, सुनिश्चित भविष्य निर्माणका लागि ।
एनआरएनले उठाउने मुद्दा नेपाली पुरुषका मात्र नभएर नेपाली महिलाका पनि हुन् ।
ऐना र उमेर
उसले त मेरा दुइवटा ब्वाइ फ्रेन्डस छन एउटाले काम गरेन भने अर्कोसंग जान्छु पो भनी हा… हा…।